नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पुष्पकमलजी अव धरातलमा टेक !
पुष्पकमलजी अव धरातलमा टेक !
- देवशंकर पौडेल
जगजाहेर कुरा हो- एक जमानामा माओवादीको 'प्रचण्डपथ' मुलुकको 'असी प्रतिशत भू भाग' आफ्नो कब्जामा रहेको दावी गरिरहेको थियो। वनका चराहरूले समेत चारो टिप्न, गुँड लगाउन, फुल पार्न, कोरल्न, आकासमा उड्न पनि अनुमति लिनुपर्ला जस्तो थियो। हावा, वादल, वर्षा, हिमपात आदि समेत न चल्थे न वर्षन्थे। मानौं चराचर जगत उसको खटनमा छ। फरक मतको सातोपुत्लो अडिले ठाउँ थिएन। माइती, मावली, हाट-बजार जान पनि 'भिसा'को ब्यवस्था थियो। उल्लङ्घन भए के हुन्थ्यो, भनिरहनै परेन। राज्य दुईटा थियो। सिंहदरबारको शासन जिल्ला सदरमुकाममा खुम्चिएको थियो।
बाँकी भूभाग हिन्दुस्थानमा बसेर शासन गर्नेहरूबाट आक्रान्त थियो। 'दिल्लीबासी'को 'जन-शासन' कालमा घटाइएका घटना विश्व ब्रह्माण्ड अटाउने हज्जारौं कम्प्युटर (शेषनाग)ले पनि वर्णन गर्न नसक्ने अवस्था थियो। पटक पटक कुच्चिएर जीर्ण कलमले बयान गर्नु दुस्साहस हुन जान्थ्यो। तर पनि आजको सन्दर्भमा एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना भने उल्लेख गर्नै पर्ने भएको छ। जो खोजी पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि राम्रो सामाग्री पनि बन्न सकोस्। चन्द्रशम्शेर कालमा अमलेख हुनेको पनाति-खनाति पुस्ताको भुजेल परिवार गरीबीबाट अझै मुक्त हुनसकेको छैन। दास प्रथामा मानिस किनबेच हुन्थ्यो। त्यसबेलाको क्रुरताको बारेमा बताइरहनु छैन। पुस्तौं बितिसक्यो आजसम्म पनि नेपालका भुजेल परिवारको आर्थिक र सामाजिक अवस्था आँठा सरह उठ्न सकेन। यो परिवार पनि पाखुरा बजारेर जिवीका चलाइरहेको थियो।
गोपालका विवाहित छोरा रवीन्द्रले दोस्री केटी भगाएछन्। त्यस वापत माओवादीहरूले रवीन्द्रलाई उनीहरूको पार्टीमा बुझाउन उनका पिता गोपाललाई दवाव दिए। आफुखुसी केटी लिएर हिडेका छोरालाई फिर्ता ल्याउन सक्ने कुरै थिएन। असमर्थ भएपछि, गोपाल परिवारमाथि पार्टी आदेशको अपहेलना गरेको कसुर ठहर भयो। सजायँको भागिदार हुनुपर्ने फैसला सुनाइयो। आदेश पालना नगरेको भन्दै रामेछाप जिल्लाको फुलासी-३, चन्दनेस्थित घरमा (२०६३ वैशाख २२ गते दिउसो ४ बजे) घंगारुका काँचा लाथ्राधारी 'गौरवशाली' पार्टीका नेताहरू जम्मा भए।
'पार्टीमा छोरो किन दाखिला नगराएको?' भनेर 'जन-न्यायाधीस'ले सोधे। गोपाल परिवारले असमर्थता जनाए। 'अझै ल्याउन सकिन भन्छस्' भन्दै ४५ बर्षका गोपाललाई डोरीले पाताफर्काएर लाठा बजार्दै अज्ञात स्थलतिर खेदे। कुट्दै एउटा घरमा लगेर बसाए। कुट्दा-कुट्दा थाकेर 'न्यायाधिस'हरू निदाए, यही मौकामा गोपाल बन्धन छिनाएर भागे। भोकै प्यासै ओडारमा दुईदिन बिताए। त्यसै रात उनीहरू गोपालको घरमा पुगेर 'मान्छे कहाँ लुकायौ?' भन्दै ४० वर्षीय गोपालकी श्रीमती मानकुमारी, ८४ वर्षका पिता नरबहादुर, आमा नरमाया, भाइ सीताराम-३५, अर्जुन-३०, विष्णु-२०, छोरी कृष्णकुमारी-१७, रीता-५, तीन बर्षको काखे छोरा र साइलाबाको छोरा सोमबहादुर समेत लाठा नभाचिउञ्जेल भकुराइमा परे। परिवार लम्पसार भयो। कुटाइ खाने भन्दा पहिले कुट्नेहरू नै थाके। परिश्रमी परिवार गरिखान नसक्ने गरि धुलिएर गाउँबाटै लखेटियो। शरीरभरि नीलडाम लिएर भुजेल परिवार न्यायको खोजीमा मन्थली झरे। दुईवर्षसम्म त्यतै बसे। उता 'गोपालको घरको रेखदेख गर्नेको यही हविगत हुन्छ' भन्ने उर्दी जारी भयो। खान नपाएर गोरू, भैंसी र सुँगुर आदि पशुहरू थलामै मरे।
'शान्ति प्रकृया'मा सामेल माओवादीको व्यवहारबाट प्रहरी र प्रशासन आजीत र रनभुल्ल थियो। देखेको नदेखेइ गरेर जागिर खान विवश थिए। अर्कातिर पीडितका आस्थाका केही प्रमुख नेताहरू, शेषनाग हुने लालसामा जिब्रो थपेर दुई जिब्रे बन्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेका थिए। पीडित कार्यकर्तासँग पुरानो जिब्राले बोल्थे, पीडकहरूसँग थपिएको नयाँ जिब्राले वेग्लै कुरा गरिरहेका हुन्थे। यही कारणले जनआन्दोलनमा समेत सक्रिय सहभागी गोपाल भुजेलले त्यत्रो जोखिम उठाएर सदरमुकाममा पुग्दासम्म न्याय पाएन। जन आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धि, उनका नेताहरूलाई मन्त्री, राजदूत, विदेश भ्रमण आदि, इत्यादि दिन मात्र सीमित भयो।
गोपालका परिवारलाई कुटेर 'न्याय दिएको' केही दिन पछि 'न्यायाधिसहरू'का प्राधिकारले जात मिल्दो कन्या खोजेर 'सुपुत्र'को दोस्रो विवाह गराए। नौमति बाजाको तालमा कम्मर मर्काइ-मर्काई, जुल्फी लर्काई-लर्काई चारकुने आगनमा छमछमी नाचे। त्यस वापत 'नायक' परिवारले पिटाइ खानु परेन, न त घरबाट निकाला नै हुनुपर्‍यो। विचरा गोपाल छोराको दोस्रो बिबाहमा न सामेल भए, न बाजा बज्यो, न त नाचे नै। थाहा न पत्तो अनाहकमा भयानक कहर काट्नु मात्र पर्‍यो। त्यसबेला 'सानालाई ऐन र ठूलालाइ चैन' भन्ने उखानको प्रसङ्ग उठेको थियो। हुँदा हुँदा अहिले पुष्पकमल पुत्रले तेस्रीसम्म जुटाइसक्दा पनि उनिहरूलाई अदालते वा भाटे कुनै पनि किसिमको सजायँ भएको छैन।
'आफ्नो बालो, अर्काको बाली' राम्रो देखिन्छ भन्छन्। हिरण्यकसिपु मात्र आफ्नो छोरा प्रह्लाद बिरुद्ध उभिए, बाँकी दुनियाँदारहरू सन्तान मोहमा लठ्ठ छन्। धृतराष्ट्र, गान्धारीको पुत्रमोहको उदाहरण मिथक माने पनि, आधुनिक ज्ञानेन्द्र शाहका छोराको कालो पदार्थ खाने र गाडी हुँइक्याउने उद्दण्डता नेपाली जनताले पचाउन सकेन। सताब्दीऔं पुरानो एकछत्र शासनको धङ्धङीको परिणाम तत्काल उत्तराधिकारी घोषणा गर्न सकेनन्। दसैंको रमझममा नेपाली जनताहरू ब्यस्त भएको मौका छोपेर युवराज घोषणा गर्नुपरेको थियो। 'अत्याधुनिक' पुष्पकमल दाहालले एकवर्ष पनि शासन गरेनन्। छोटो शासकका "युवराज"ले खानपिन मात्र होइन अर्काकी श्रीमती समेत भगाएर देखाइसके। पुष्पकमलको पुत्रमोह भविष्यमा कुनरुपमा प्रकट हुने हो, हेर्न बाँकी नै छ। ठान्नेले पुष्पकमल र एमाओवादीको समस्या ठान्लान्। निष्ठाको राजनीति गर्ने सम्पूर्ण वाम आन्दोलनकर्मीहरुका लागि यो सरमको विषय भएको छ।
हेग (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत)को कार्यक्षेत्रमा नेपाल परिदिएको भए, "सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग" बनेको भए, आजका धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका हुने थिए। 'जनअदालत'द्वारा हिजो यस्ता धेरै मुद्दा फैसला भएका छन्। जस अनुसार छोराको कसुरमा बाबु-आमा, हजुरबा-हजुरआमा समेत ढुट्याउने 'प्रचण्डपन्थीय' न्यायको नजिर स्थापित छ। अव गोपाल परिवारले न्याय पाउँछन् कि 'पथनायक' पुष्पकमलले सजायँ। वा, गोपालहरू पीडा भोगी रहने, 'महान् नेता'हरू ब्रह्मलुट गरिरहन पाउने!
ठूलालाई छुट दिएर सानालाई थिचोमिचो गर्ने 'न्याय' के न्याय! पीडितहरूका पीडा र वेदना अलपत्र पारेर पीडकलाई अर्बौं भोगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघ के राष्ट्रसंघ! उपभोग त परै अनुभुतिसम्म पनि गर्न नसकेको 'गणतन्त्र' के गणतन्त्र! 'श्री ३ महाराजा'ले समेत न्याय दिएको परिवार माथि थिचोमिचो गर्ने 'लोकतन्त्र' के लोकतन्त्र! आन्तरिक नै किन नहोस्, झाँगिएका समस्याहरू कुर्चीमा अनुवाद भएर पुर्पुरातिर सोझिन लागेका छन्। 'प्रभूलोक'बाट प्रकाशित "ट्रान्जिसन इन नेपालः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्राजायल पिस" नामको पुस्तकले औंल्याएका प्रसंग के हुन्?
ब्यक्ति र परिवारको निजी मामिलामा कुरा उठाउनु राम्रो होइन। परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण यस्ता घटना घट्न गएका पनि हुनसक्छन्। स्वयम् माओका पनि चारवटी पुगेका थिए। यहाँ त 'कोही राजा र कोही रैती हुने कर्मकाण्डी अहंकार तोडिनु पर्छ' मात्र भनिएको हो। जनताको कुरा गरेर नथाक्ने पुष्पकमलजी! अव धरातलमा टेक। फुलासीका भुजेल परिवार जस्ता पीडित देशभरी असंख्य छन्। कि देशभरीका यस्ता घटनामा अन्याय गर्ने तिम्रा कार्यकर्तालाई खोजी-खोजी सजायँ गरेर गोपालहरूलाई न्याय देऊ, कि आफैंलाइ दण्डित गर। विद्रोही पनि तिमी, सत्तामा पनि तिमी। तिम्रै काम हो, तिमी नै गर।